Global Voices teny Malagasy » Arabeyes: Alahelo An’i Bhutto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Avrily 2018 16:23 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Azia Atsimo, Arabia Saodita, Bahrain, Emirà Arabo Mitambatra, Israely, Katara, Pakistana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Voina
Tamim-pihetseham-po no nandraisan'ny tao Afovoany Atsinanana ny vaovao momba ny fahafatesan'ny Praiminisitra teo aloha Benazir Bhutto .
Avy ao Bahrain, mandefa  ny fiarahamiory avy aminy ho an'ny vahoakan'i Pakistana ny blaogera Mahmood Al Yousif
“Mirary fihononana ho an'ny vahoaka Pakistaney aho noho ny famoizana azy sy ny fomba baribarianina nisehoany. Rehefa tsy misy tavela intsony afa-tsy ny lalàn'ny hery sy ny fampihorohoroana mba hahafahana mampita ny fomba fijerinao, dia efa very sahady ny tolonao. Tokony hazava sy hentitra tsaaìra amin'ny fanamelohanya an'ireo tranga fampihorohoroana ireo olona mpandàla fandriampahalemana. Satria raha toa avela amin'izay misy azy ireo zavatra ireo, ary raha leferina tsotra fotsiny ny herisetra, dia mahazo antoka isika hoe tsy ho ela isika sy ireo izay tiantsika no ho tafiditra anaty fifampitifirana “, hoy izy manoratra.
Nalahelo ihany koa ny blaogera Saodiana Rasheed Abou-Alsamh tamin'ny fahalasanan'i Bhutto. Nanoratra  izy fa:
Sady tezitra aho no nalahelo. Mpankasitraka foana an'i Benazir sy ny fianakaviana Bhutto aho. Amiko, ny Antokom-bahoaka pakistaney, izay naorin'ny rain'i Benazir, Ratompokolahy Praiminisitra Zulfikar Ali Bhutto tamin'ny taona 1967, dia nampiseho an'ireo idealy liampivoarana sy laika izay mety hanampy hanosika an'i Pakistana hivoaka amin'ny laharan'ireo firenena andalam-pandrosoana tsy mizotra araka ny tokony ho izy ho ao anatin'ireo firenena mandroso toa an'i Brezila sy Malezia.
Avy eo ilay bilaogera sady mpanao gazety nampifandray nankany amin'ny tafatafa iray nifanaovany tamin'i Murtaza, rahalahin'i Bhutto, izay nisy namono tao Pakistana ihany koa.
Tao Qatar, mampifandray  ny herisetra famonoana azy sy ny toe-draharaha mampidi-doza ao Pakistana i Abdulrahman Warsame. Manazava izy fa:
Asehon'ny fomba barbariana namonoana azy ny halalin'ny mahamahery setra an'i Pakistana; manameloka ny Alqaeda sy ireo talibans ny governemanta, izay efa nandrasana! Saingy tsy afaka ho ny governemanta izany; Ho kapoka mafy ho an'i Parvez Musharraf io izay naniry ny hizoran'ireo fifidianana tao anaty filaminana, mba hahazoana ny maha-ara-drariny, ary i Bhutto no kandidà tena sahaza mba hanamboarana indray ny endriny any Andrefana. Nefa ankehitriny lasa izy, mihitsoka miaraka amin'i Nawaz sharif, mpifanandrina goavana aminy izy.
Tsy misy mahalala izay ho fandehan-javatra ao Pakistana aorian'ireo fifidianana ankehitriny izay nandraisan'ny governemanta fanapahankevitra ny tsy hanemorana azy ireo, saingy tsy maintsy mitohy ny korontana ara-politika raha mbola i Musharraf no hifehy.
Emirà Arabo Mitambatra:
Seabee, izay monina ao Dubai, mahita ny famonoana an'i Bhutto ho toy ny tsy misy dikany . Manoratra izy fa:
Rehefa sainina, heveriko fa tsy mahagaga mihitsy ny hoe nisy namono i Benazir Bhutto. Ny marina, im-betsaka nitantara ny zava-doza izy tao ho ao.
Betsaka kokoa ny fahavoazan'ny hafa nanjo an'ireo hafa maty sy naratra vokatry ny fanafihana azy. Ary aoka tsy ho diso hevitra, mbola ho maro ireo ho faty vokatr'io ato anatin'ny andro sy herinandro ho avy.
Tsikera mahatalanjona inona re ity raha amin'ny maha-olombelona antsika e. Taona an'arivony maro nisian'ny fivoarana fa ny fisainantsika mbola tavela any amin'ny fotoanan'ny fahagola hatrany, tsy misy atidoha, ny bibidia lozabe indrindra eto amin'ny tany.
Ho an'iilay Israeliàna Nissim Dahan, izay monina ao Etazonia, ny famonoana an'i Bhutto dia mampahatsiahy azy ny “fahatsapana tsy fisiana fanantenana izay manemitra ny ampahany betsaka amin'izao tontolo izao.” Tohizany  lavidavitra kokoa:
Tsy mpianatra ho mpahay ny tantaran'i Pakistana aho. Ary nampahafantarina ahy vao haingana fa, tany aloha, Ramatoa Bhutto dia naneho kitapo iray ifangaroan'ny fanajàna sy ny hetahetan'ny vahoakany. Eny, misy ireo fiampangana tsindraindray mahakasika ny kolikoly, sy ireo fiampangana azy ho nanohana an'ireo talibàna. Nefa tsy afaka ny hino aho fa ho faritana avy amin'ireo tsy fahombiazany fotsiny ny lova navelany.
Maro ireo zavatra azo heverina rehefa mikasa ny hitsara azy isika. Vehivavy iray izay nankahàtra ireo olana izy ary indroa voafidy hitondra ny firenena izay tsy nivonona mialoha hifidy azy. Eny, noroahana noho ny kolikoly izy, nefa, ary tsy azo atao tsinontsinona io, nisafidy ny hody any aminy izy. Tsy olom-bodo badobado izy. Fantany fa niatrika loza mitatao mahatsiravina izy mikasika ny fiarovana ny tenany manokana, teboka iray nanaraka azy tany an-trano vantany vao tonga izy. Kanefa, nisafidy ny hiverina izy mba hifaninana amin'ny sehatra politika. Afaka manazava an'izany samirery ve ny fikasana jamba? Heveriko fa tsia. Tsy maintsy nisy faniriana avo lenta tao anatiny tao ka nanosika azy hiatrika loza. Angamba mety ho nandray lesona tamin'ireo fahadisoana tamin'ny lasa ve izy ary nikasa ny hanitsy ireo zavatra diso? Maminavina fotsiny no azontsika atao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/19/116917/
 Benazir Bhutto: http://www.answers.com/Benazir%20Bhutto%20
 tsy misy dikany: http://dubaithoughts.blogspot.com/2007/12/more-pointless-murders.html